Sri Lanka Tourism ichiedza kumutsidzira indasitiri mushure mekudzokera shure kwekutya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Sri Lanka Tourism ichiedza kumutsidzira indasitiri mushure mekudzokera shure kwekutya
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • chengetedzo • Sri Lanka Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Sangano reSri Lanka Tourism riri kushanda kumutsidzira iyo indasitiri iyo yakambodzokera kumashure kwenguva pfupi nekuda kwechiitiko chazvino chekutyisa. Svondo rapfuura yeIsita, musi waApril 21, 2019, machechi matatu uye matatu emahotera emhando yepamusoro mumabhizimusi makuru eColombo zvaive zvinangwa zvekubhomba kuzviuraya.
Mazuva maviri apfuura, Gweta Gurukota reSri Lanka, Dappula de Livera, akaraira mukuru wemapurisa achitora danho kuti atange kuferefeta kwaimbove Munyori wezveDziviriro Hemasiri Fernando pamusoro pe "kukanganisa kukuru" kwakakonzera kukundikana kwekuchengeteka mabhomba akauraya vanhu vanopfuura mazana maviri nemakumi mashanu. Kurudziro yake yakavakirwa pane zvakawanikwa nebhodhi rakakosha rekuferefeta rakasarudzwa neMutungamiri Maithripala Sirisena mushure mekuputika kwaApril 2. Fernando akatsika pasi mazuva mana mushure mekuputika, mushure mekunge Sirisena akumbira kusiya chigaro uye neMukuru wemapurisa Pujith Jayasundara, uyo akaramba kusiya chigaro. Sirisena akazomisa basa Jayasundara ndokugadza mukuru anoshanda semapurisa.
Zvinotumirwa kuti vamiririri veIndia vanotumira yambiro kuvakuru veSri Lankan kuti chirongwa chaiitika, asi Sirisena nemutungamiri wehurumende, Ranil Wickremesinghe, vese vakati havana kuziviswa nezveyambiro pamberi pekurwiswa.
Mukuyedza kuwedzera vashanyi veIndia vanobuda vanoshanyira Sri Lanka, Sri Lanka Tourism pamwe neSriLankan Airlines, The Hotera Association yeSri Lanka (THASL), uye vashanyi vekunze vakasvitsa mapakeji anokatyamadza, achinanga kuIndia, nhamba yayo yekutanga musika. .
Iyo pasuru iri kupihwa neSri Lanka Tourism inosanganisira yakaderedzwa nendege, pekugara, kutakura uye nezvimwe, kubva pa30% kusvika 60% kubva pamitengo yakajairwa. Iyi pasuru yakasarudzika kuIndia uye inogona kuwanikwa munzvimbo yeSri Lankan Airlines 'network inofukidza maguta gumi nemaviri muIndia aine ndege zana nemakumi matatu nematatu dzendege.
Mme Chamari Rodrigo - Consul General, Sri Lanka, pamwe nenhumwa yeSri Lankan inotungamirwa na Hon. John Amaratunga, Gurukota rezveKushanya, Mhuka dzesango uye zveChristian Religious Affairs, vakapinda musangano uyu.
Iye Hon. Gurukota rezveKushanya rakataura nezve yakachengetedzwa nharaunda yekuchengetedza muSri Lanka uye yakavimbisa vateereri kuti chiitiko ichi hachizodzokororwazve. Akaenderera mberi nekukumbira vezvenhau kuti vatsigire zvizere kuyedza kwakaitwa neSri Lanka Tourism Board pamwe nevakakosha vevashandi veindasitiri iyi uye vakavatenda nerutsigiro rwavakawedzera munguva yakapfuura izvo zvakabatsira mukuita India ive musika wekutanga weSri Lanka.
Iwo mashanu ekushanya mapakeji kuenda kuSri Lanka anotangira kubva mukubatanidzwa kwekugara muColombo, Kandy, Nuwara Eliya, Dambulla, Sigiriya, neSouth Coast ine sarudzo dzakawanda kuti dzikwanise chero bhajeti. Izvi zvinopihwa zvichave zvinoshanda kwekugara kubva munaJune 5, 10 kusvika Nyamavhuvhu 2019, 30 uye inogona kuwanikwa kuburikidza nevamiriri vevashanyi network muIndia.
VaKishu Gomes, Sachigaro, Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, vakatsanangura chirongwa cheshambadziro uye chekushambadzira chakanangana nekumutsiridza indasitiri pamwe nekukura kwakatarwa neSri Lanka Tourism. Zvakare, VaGomes vakakumbira vashanyi veIndia kuti vatore pasuru inoyevedza vachitsigira maitiro ekupora semuvakidzani anoremekedzwa kwazvo weSri Lanka.
"India yanga iri musika wekutanga kuSri Lanka mumakore gumi apfuura uye muna 2018 vakanyora vashanyi vanopfuura zviuru mazana mana kuchitsuwa ichi. Mutakuri wenyika, SriLankan Airlines, anoshanda nendege gumi nemaviri vhiki nevhiki kubva kumaguta akakosha eIndia, uye tinotenda kuti mikana yakadaro inokurumidza kufambiswa mumaguta eIndia, "vakadaro VaDimuthu Tennakoon, Head of Worldwide Sales and Distribution (HWSD) veSri Lankan Airlines.
Pamusoro pezvo, Master Card, iyo ine anopfuura mamirioni zana nemakumi masere evaIndia makadhi, vakauyawo mubhodhi kuzosimudzira mapakeji akavhurwa kuburikidza nechavo dzakabatana zvakanaka.
India yakaverengera 18.2 muzana, inova 424,887 2018 yakasvika mu10.5, inokwanisika 2017 muzana kukwira kubva gore rapfuura. Muna 383,000 pachayo, maIndia mazana matatu ane makumi matatu nematatu akashanyira kwaisvika. Muna 2018, nhamba iyi yakawedzera kusvika pa426,000. Sri Lanka inovavarira kusimudzira zvishoma nezvishoma kuenda kumichato uye mafirimu mafirimu gore rino, nekuzorora kuri iko kwekutanga tarisiro.